कसैको साथ नपाएर छटपटिदैँ बिहानै प्राण छोडेपछि… | OnlinePatrika.com - News of Nepal, latest and breaking news from Nepal
कसैको साथ नपाएर छटपटिदैँ बिहानै प्राण छोडेपछि…
कोरोना महामारीले देशको राजधानीमै पानी–पानी भन्दै प्याक–प्याक भएर मर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । सरकार कोरोनाविरुद्ध लड्न सबैखाले स्रोत र साधनले तम्तयारी छ भनिए तापनि अहिले बिहानैको एउटा घटना हेर्दा सरकारी तयारी उदाङ्गो हुन्छ । बिरामी आफैँ उपचार खोज्दै अस्पतालदेखि प्रहरीसम्मको सम्पर्कमा पुग्छ । उसलाई देख्नासाथ सबैको भागाभाग हुन्छ । र, पानी पनि पिउन नपाई छटपटाएर प्राण जान्छ ।
बुधबार बिहानैको प्रारम्भिक प्रहर, अर्थात् राति साढे १२ बजेको घटना हो यो । महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीमा फोनको घण्टी बज्यो । सूचना थियो, अन्दाजी ४३ वर्षको कोही व्यक्तिलाई श्वास फेर्न गाह्रो भयो, शरीर पनि रन्किएको छ । हल्का रुघाजस्तो पनि देखिन्छ । अर्थात्, कोरोना संक्रमणको सम्भावित सबै लक्षण छ ।
प्रहरी कमलपोखरीमै रहेका ती व्यक्तिको घरमा पुग्यो । बिरामी छट्पटाइरहेका थिए । प्रहरीलाई आदेश छ, सम्भावित संक्रमित व्यक्तिको नजिकमा नजानु, पिपिईधारी स्वास्थ्यकर्मी वा एम्बुलेन्सको सम्पर्कमा गएर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु । यतिञ्जेलमा बिहानको करिब १ बजिसकेको थियो ।
कमलपोखरीका एकजना इन्स्पेक्टर आफैँ दौडधुप गर्दै थिए । उनले एम्बुलेन्स खोजे । कतै पाएनन् । पिपिईधारी स्वास्थ्यकर्मी भेटिनु त टाढाको कुरा भयो । बिरामीको छट्पटाहट बढी रहेको थियो । पानी पिउन चाहे, तर नजिक पर्नै नहुने कारण पानी कसले दियोस् ?
प्रहरीको उद्धार प्रयास असफल भयो । र, बिहानको करिब २ बजे बिरामीको पीडा एकदमै बढेपछि उनका छोराले बोकेरै कमलपोखरीस्थित हिमाल हस्पिटलमा पुर्याए । अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्याएर छोराले ड्युटीमा बसेका स्वास्थ्यकर्मीलाई समस्या सुनाउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु ‘आम्मामा…’ भन्दै यताउता गर्न थाले ।
प्यासले प्याक–प्याक भएका बिरामीले पानी पिउनै नपाई अघि बिहान करिब ३ बजे प्राण त्यागे । उनको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल पुर्याउन फेरि अभाव छ, एम्बुलेन्सको । प्रहरीले पोष्टमार्टमका लागि आवश्यक पर्ने कागजात त तत्कालै बनाइदिएको छ तर लक्षण बुझ्दा कोरोनाको संक्रमण देखिने कारण न शवको नजिक कोही जान सकेका छन्, न उनको स्वास्थ्य परीक्षणबाट रोग प्रमाणित हुन सकेको छ ।
सूचना थियो, अन्दाजी ४३ वर्षको कोही व्यक्तिलाई श्वास फेर्न गाह्रो भयो, शरीर पनि रन्किएको छ । हल्का रुघाजस्तो पनि देखिन्छ । अर्थात्, कोरोना संक्रमणको सम्भावित सबै लक्षण छ ।
अर्थात्, मरेर पनि सुख पाएनन् । उनी कोरोना संक्रमित हुन् भन्ने कुरा कुनै परीक्षणबाट पुष्टि हुन नसकेको छैन । प्रहरीले मृतकको आनीबानी बुझ्दा उनी अत्यधिक मदिरा सेवनकर्ता हुन् भन्ने खुलेको छ । लकडाउनको अवधिमा घर वरपरमात्रै निस्किएका थिए तर धेरै व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगेका भने थिएनन् । अत्यधिक मदिरा र धुमपान सेवन गर्ने व्यक्तिमा मुटु र फोक्सोको समस्या आउनु स्वाभाविक हो । उनलाई समस्या आउनुको कारण मदिरा मात्रै पनि हुनसक्छ । तर, त्यसरी समस्यामा परेको व्यक्तिले समयमा उपचार पायो भने बाँच्ने गुञ्जायस बढी हुन्छ । उनले उपचारै पाएनन् ।
सरकार कोरोना संक्रमण फैलन नदिन र फैलिएका व्यक्तिको उद्धारका लागि उच्च सतर्कतासहित सक्रिय छ कि छैन भन्ने कुरालाई यो घटनाले प्रष्ट पार्दैन र ? साभार : जनआस्थाअनलाइन
Previous articleकृष्णलाल सँगसँगै रविन्द्रको राहत
Next articleमनमा राख्नुपर्ने महालक्ष्मी नगरपालिकाको मन्त्र
सिंहदरबारको पूर्वीढोकामा स्यानिटाइजर बुथ स्थापना
मालपोत कार्यालयमा १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
वडाध्यक्ष पक्राउ प्रकरण : पुच्वको सबैभन्दा ठूलो गुथिपनि जाग्यो !
कसरी सम्भव छ, एउटी महिलाको यति कठोर मन
आज रातिदेखि भारी वर्षाको सम्भावना
ह्वाइट हाउस अघिल्तिर गोली चल्यो